Give STL နေ့တွင် Dutchtown ကိုကူညီပါ• DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
Give STL နေ့၌ Dutchtown ကိုကူညီပါ
အပေါ် Posted မေလ 5th, 2021
DT2 • Downtown Dutchtown စွမ်းဆောင်ရည်တည်ဆောက်မှုအတွက်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ အချိန်ပိုင်း ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ကိုငှားရမ်းခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ UrbanMain ကော်မတီများကိုဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးထွားလာပြီးကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုများကိုခံယူရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်။
Give STL နေ့၊ မေလ ၆ ရက်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းသောတိုးတက်လာသော Dutchtown ဆီသို့ ဦး တည်နေသည့်အရှိန်အဟုန်ကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်နီးချင်းများနှင့်မိတ်ဆွေများကိုအကူအညီတောင်းသည်။ ယခုလှူဒါန်းပါ!
ခရော -Butz အာမခံ Give STL နေ့တွင်အလှူငွေဒေါ်လာ ၅၀၀၀ အထိကိုကိုက်ညီရန်အလွန်ရက်ရောစွာကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ဒီပွဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ သင်၏လှူဒါန်းမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနှစ်ဆဖြစ်စေ ငါတို့ရဲ့ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ ရန်ပုံငွေရှာတဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုရောက်အောင်ကူညီပေးပါ။
ဒီနှစ်မှာငါတို့မျှော်လင့်နေတယ် ရန်ပုံငွေရှာ စီးပွားရေးမျက်နှာစာထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်အတွက်အရေးပေါ်လိုအပ်သည့်ရန်ပုံငွေ၊ အများပြည်သူဆိုင်ရာအနုပညာပစ္စည်းများ၊ အသေးစားစီးပွားရေးသင်တန်းများနှင့်စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်လူထုအသိုင်းအဝိုင်းများစွာသော။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စီးပွားရေးအခြေခံအဆောက်အအုံတည်ဆောက်ခြင်းသည်လူမှုရေးအခြေခံအဆောက်အအုံများတည်ဆောက်ခြင်းကဲ့သို့အရေးကြီးကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိပါသည်။ ငါတို့မှာကြီးမားတဲ့အမြင်ရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုနားလည်ဖို့မင်းရဲ့အကူအညီလိုတယ်။
မကြာသေးမီအချိန်အထိ DT2 ကိုစေတနာ့ ၀ န်ထမ်းများမှသီးသန့်ခွဲထားခဲ့သည်။ အပိုဆောင်းရန်ပုံငွေရှာခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကိုစုစည်းရန်၊ ထောက်ပံ့ငွေလျှောက်ထားရန်၊ ရန်ပုံငွေထပ်မံမြှင့်တင်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အချိန်ပိုင်းဝန်ထမ်းကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်လိမ့်မည်။ ဒီအပိုစွမ်းရည်တည်ဆောက်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်အထည်ဖော်မှုအတွက်သော့ချက်ဖြစ်သည် UrbanMain ပဏာမခြေလှမ်းကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားဖြစ်စင်္ကြံများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြန်လည်ရှင်သန်စေရန်ရည်ရွယ်သောမစ်ဆူရီတွင်ပထမဆုံးသောကြင်နာသောအစီအစဉ်ဖြစ်သည်။
ကျေးဇူးပြု အရှိန်အဟုန်ကိုဆက်ထိန်းထားရန်ကူညီပါ။ ကျန်းမာရေးအကျပ်အတည်း၏ကြားမှ ငါတို့ရှိသမျှသည်လွန်ခဲ့သောလပေါင်းများစွာကတဆင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်, DT2 ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားမှုကိုဆွဲဆောင်, စေတနာ့ဝန်ထမ်းအသစ်များအပေါ်ယူဆောင်နှင့်ယခင်ကထက် Dutchtown များအတွက်ရလဒ်များကိုပိုမိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုကြီးထွားရန်အဆင်သင့်ရှိပြီးလူတိုင်းအတွက်ပိုမိုကောင်းသောအိမ်နီးချင်းကိုဖြည့်ဆည်းရန်ပိုကြီးပြီးပိုကောင်းသောစီမံကိန်းများကိုပြုလုပ်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
မှ $ 5,000 အထိအံ့သြဖွယ်ကိုက်ညီမှုလှူဒါန်းမှုနှင့်အတူ ခရော -Butz အာမခံကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးနှင့်အိမ်နီးချင်းများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ရပ်ရွာလူထုများအားပိုမိုထောက်ပံ့ရေးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်များကိုကြီးမားသောတိုးတက်မှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးဒီနေ့လှူပေးပါ
Give STL နေ့တွင်သင်မပါဝင်နိုင်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အကူအညီကိုအမြဲသုံးနိုင်ပါသေးသည်။ အလည်အပတ် dutchtownstl.org/donate တစ်အောင် တစ်ကြိမ် or လစဉ်အလှူငွေထောက်ပံ့။ သင်တို့သည်လည်းလုပ်နိုင် ငါတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်အကြောင်းထပ်ဖတ်ကြည့်ရအောင် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကျော်။
အောက်မှာ Filed ရန်ပုံငွေရှာ. အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ. DT2, ဒိန်းမတ်, ရန်ပုံငွေရှာနှင့် UrbanMain. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ.
ဒီ post ကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် မေလ 5th, 2021 .
ဒိန်းမတ် ရန်ပုံငွေရှာ Give STL နေ့၌ Dutchtown ကိုကူညီပါ